China OEM eyi Cotton ịsa ahụ isi katrij iyo Core Manufacturer and Supplier | Xinpaez
New Tech ịsa nyo - 2nd Generation ngwaahịa, Ike, More irè kwesịrị ekwesị, High Permeability
Ntucha ịsa ahụ - Maka imputies, Rust, Dust, Nemotodes, ETC.
Ogologo Ndụ - 3-6 ọnwa
OEM ODM - Ike Production Production, ngwaahia nke ngwa ahia.
Atụmatụ: Ịsa filtration
Opekempe iji ibu: 1000
Ma na-anabata customization: OEM, ODM na-anabata
Nha: 70/106/124/118 MM
Eyi owu ịsa nyo Core
Ihe mara mma: eriri polyester (ihe PP)
Oge ngbanwe: ọnwa 3 ruo 6, dabere na ogo mmiri, na-ejikarị 10000L.
Function: Iyo ndị colloidal adịghị, apịtị, ajari, ahụhụ àkwá, organic na-emetọ, wdg
Filtration Rate: 5 Micron
A na-eji paịlị polypropylene resin mepụta ihe nhicha owu nke polypropylene dị ka akụrụngwa iji mepụta eriri, nke eriri ahụ na-ejikọta onwe ya. Ọdịdị nke ihe nzacha ahụ bụ ihe owuwu nwere akwa oyi akwa, eriri dị n'ime ime, mpempe dị na mpụga, na oyi akwa dị n'ime. Nzacha si n'èzí banye n'ime, nke dị nso na oyi akwa dị n'ime ihe nzacha ahụ, obere nha nha, nke dị elu karịa nzacha nzacha.
Nke a pụrụ iche grajentị miri filtration kpụrụ a atọ akụkụ nyo fọduru mmetụta, nke nwere ike ịbụ multi-layered na miri owuwu, na nnukwu unyi ejide ikike; Eyi gbazee fụọ iyo mmewere bụ ike, mgbe iyo uzo mmiri na tinyekwa mgbali dị iche bụ 0.4Mpa, na filtration eruba ọnụego bụ nnukwu, na nsogbu dị iche bụ obere, The nyo isi bụ oruru; Ọ integrates elu, miri emi, keadighi rarii na ezi filtration; O nwere njirimara nke nnukwu eruba, nkwụsị corrosion, nrụgide dị elu. A na-eji ya egbochi nnukwu irighiri ihe dị ka nchara, aja na akwa ahụhụ na mmiri.
Ikwu okwu banyere nnọchi, N'ihi na eyi owu nyo mmewere bụ nke mbụ-ogbo iyo mmewere mgbe ịsa ahụ, ihe karịrị 80% nke adịghị na-ga-ẹdụk a ogbo, na ndị ọzọ adịghị ọcha na-ẹdụk, mfe nyo mmewere kpọchie. Ya mere, ndụ nke ihe owu nhicha owu na-adị mkpụmkpụ. Enwere ike dochie ihe nzacha ahụ maka ihe karịrị ọnwa abụọ na mpaghara nwere mmiri adịghị mma, ebe kachasị ogologo na ogo mmiri ka mma agaghị agafe ọnwa isii. Yabụ ọ bụrụ na ịzụta isi ịsa ahụ nwere ihe nhicha owu nke PP, iji zere mmetọ nke abụọ, a na-atụ aro ka ị dochie isi ihe nzacha ahụ kwa ọnwa 3-6 ma ọ bụ karịa.
Esi ekpe ikpe mma eyi owu nyo mmewere
1. Biko lelee ibu arọ. Anyị nwere ike iji aka anyị tụọ ịdị arọ ya. N’ibu dị arọ, njupụta nke eriri nke ihe nchacha dị elu. Ogo dịkwa mma.
2. Biko lelee ihe a. Mgbe ị na-ahọrọ ihe nzacha, ị ga-enwerịrị nchekwube maka ihe nke ihe nza. Agba nke mgbe nile isi isi bụ edo na elu bụ ewepụghị. Igwe dị ala karịa adịghị n'otu na agba na adịghị mma.
3. Mkpakọ. N'ozuzu, ihe njupụta nfe dị elu nke nza. The mma mkpakọ arụmọrụ, mma àgwà nke eyi owu nyo isi. Anyị nwere ike ikpe ikpe site na mmetụta aka, ike mmetụta aka, nke ka mma mkpakọ arụmọrụ.
Ohaneze anyị na-enye nha anọ, ọrụ OEM na ODM dị. N'agbanyeghị nha ị chọrọ,
anyị nwere ike ịhazi ya. Ugbu a anyị nwere usoro mmepụta 10 na-arụ ọrụ na PP Core yana mmepụta kwa ọnwa nke 2 nde.
Nke gara aga: OEM Okpukpo Vitamin C ịsa ahụ nyo katrij
Osote: New tech High Pressure ẹdụk Hand Shower
abs ịsa ahụ isi
kacha mma ịsa ahụ
isi ncha ntutu
okomoko aka ịsa ahụ isi
okomoko ịsa ahụ isi
Ejiji Water Azọpụta Hand ịsa Head
OEM Okpukpo Vitamin C ịsa ahụ nyo katrij
Obere Multi-Filtered ịsa isi
Okomoko Carbon Fiber ịsa Head na Myọcha